Inkonzo - iChinatown Grain Machinery Co., Ltd.
Siqulunqe uluhlu loomatshini kunye nezisombululo kubuchwephesha bokutya okuziinkozo, ioyile enokutyiwa kunye nomzi mveliso wokulungiswa kokutya, njengokuqokelela, ukugcina, ukucoca, ukuhlela, ukuhlamba, ukugaya, ukuxuba, ukuvelisa, ukumila, kunye nokupakisha.
Njengomboneleli wesisombululo kumzi mveliso, sibonelela ngaphezulu kakhulu koomatshini kuphela, kodwa izisombululo ezinemveliso ezinokuphucula abathengi ukuba bafumane ixabiso. Ngexesha lophuhliso, asikaze sityeshele naziphi na iingxaki kunye namathuba okufezekisa iimveliso zethu, kwaye yile ndlela esinokugcina ngayo indawo yethu ekhokelayo kwishishini.
Oomatshini bethu basetyenziswa ngokubanzi kubasebenzisi abaninzi basekhaya. Kwaye iiprojekthi zethu zokujika-eziphambili kunye nezixhobo ezizodwa zithunyelwa eThailand, eBurma, eOstreliya, eSri Lanka, e-Itali, eJamani, eChile, eArgentina, eBrazil, eUkraine nakwamanye amazwe nakwimimandla engaphezu kwama-20. Abathengi abaninzi kwihlabathi liphela batyelele inkampani yethu kwishishini. Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi kwaye sanikezela ngezisombululo ezigqwesileyo ngezixhobo ezisemgangathweni kunye neenkonzo zobugcisa, kwaye safumana ukuqondwa okuphezulu kubo.